Tin Desoldering Iron: Zvazviri, Mashandisiro Ako, Uye Ndeipi Yokusarudza | Mahara emahara
Isaac | 20/09/2021 09:00 | Zvemagetsi zvigadzirwa
Un tini inodonha simbi kana pombi yetini Icho chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya nemagetsi, nekuti inobvumira kubvisa tin solder. Ndokunge, angave anopikisa ku tini yesimbi simbi. Uye, kunyangwe kubvisa simbi kunogona kuitwawo mune dzimwe nzira dzehunhu, neiyi gadget iwe uchazviita chaizvo chaizvo uye nekukurumidza.
Saka iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve izvi zvigadzirwa zvemagetsi, muchinyorwa chino iwe uchaona rwakajeka ruzivo kusarudza yakasarudzika yakakodzera kune rako basa.
1 Chii chinonzi tini inodonhedza simbi?
1.1 Mashandisiro esimbi inodonha
2 Tin Desolder Kurudziro
Chii chinonzi tini inodonhedza simbi?
Un tini inopwanyika iron Icho chigadziro chekutsigira panguva yekutenderera. Kana chakasungirirwa chikamu chakamisikidzwa zvakashata, kana iyo simbi isiri yemhando uye inosarudzwa kutanga kubva pakutanga kuti iitore, saka chishandiso ichi chinokubatsira kubvisa simbi zviri nyore.
Simbi inotengesa inoita kunge yakafanana nepenzura kana tini yesimbi simbi zvakajairika. Uye nekuda kwezano rayo, rinokutendera kuti ubvise mapoinzi emoto kunyangwe munzvimbo diki.
Mashandisiro esimbi inodonha
Uchishandisa tini inodonhedza simbi Izvo zviri nyore kwazvo, iwe unongofanirwa kuteedzera akateedzana matanho akakosha kuti ukwanise kubvisa tin solder. Izvo chaizvo zvine:
Unganidza iyo simbi yesimbi uye unomirira kuti isvike kwakawanda tembiricha poindi, senge iwe waungade kune yechinyakare soldering.
Chinhu chinotevera kuisa tipi yayo inopisa mukubata nesoder kuti ibviswe uye kumirira kuti inyungudike.
Kana izvo zvapera, iwe unogona kubvisa iyo tini nedare rinodonha. Nekuva nepombi yekukweva, zvinokubatsira kuyamwa tini yakanyungudutswa kuti usiye chinhu chakachena.
Paunenge wapedza, iwe unogona kubvisa izvo zvakayamwa zvinhu kana zvasimbisa zvakare ...
Tin Desolder Kurudziro
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga tini inopararira simbi, unogona kusarudza imwe yeiyi mhando dzakakurudzirwa:
Tin achidonhedza iron iron Mambo nepombi yekukweva uye yekukanganisa mesh inosanganisirwa.
24 chidimbu kit yekunamatira: nesimbi yekunamatira, simbi inodonha, multimeter, zvigunwe, scalpel, maturu ekumisikidza, nezvimwe.
Kudzikira tambo iine upamhi 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm, 1,5m kureba.
Fixpoint tini inodonhedza simbi pamwe yakachipa kukweva kwevatangi.
SIQUK 7 zvidimbu: yemhando tini yekudzikira simbi uye 6 mipumburu yemesheni yekudzikira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Tin inodonhedza simbi: chii icho, mashandisiro ayo, uye kuti ndeipi yaunosarudza
Kuongorora transistor: yakatsanangurwa nhanho nhanho